डा. केसीको स्वास्थ्य खस्कँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पुस २९, २०७५ श्यामसुन्दर शशि
जनकपुर — मिथिलाक्षर लिपि । झन्डै २ हजार वर्षको इतिहास छ यो लिपिको । तीन दशकअघिसम्म पूजापाठ, चिठीपत्र तथा आमन्त्रण कार्ड आदिमा प्रयोग हुन्थ्यो । अचेल व्यक्तिगत प्रयोगमा सीमित छ । आफ्नै मौलिक लिपि भएका सीमित भाषामध्ये पर्ने मैथिली हिजोआज देवनागरीमा लेख्न थालिएको छ ।
मिथिलाक्षर लिपि साक्षरता अभियानको उद्घाटन गर्दै जनकपुर उपमहानगर प्रमुख लालकिशोर साह । तस्बिर : श्यामसुन्दर शशि/कान्तिपुर
मिथिलाक्षर लिपिको संरक्षण गर्न प्रदेश २ का आठ जिल्लामा नि:शुल्क कक्षा सञ्चालन अभियान सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा जनकपुर उपमहानगरमा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। ‘मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान’ को अगुवाइ गरेको छ, मिथिला नाट्यकला परिषद्ले।
जनकपुर उपमहानगरका प्रमुख लालकिशोर साहले शनिबार मिथिलाक्षर लिपिमा ‘जनकपुरधाम’ लेखेर कक्षा सुरुवात गरे। उनीसँगै पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवछ मिश्र, शिक्षक सुनील मल्लिक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैथिली केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख परमेश्वर कापडी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कर अधिकृत तथा मिनाप अध्यक्ष परमेश्वर झासहित ३० जनाभन्दा बढी कक्षामा सहभागी भए। ‘देवनागरी र रोमन लिपि पढेका हामीजस्ता विद्यार्थीका लागि मिथिलाक्षर अलि गाह्रो छ, तर अभ्यास गर्दै जाँदा सजिलो होला,’ मेयर साहले भने, ‘यो हाम्रो धरोहर हो। यसको संरक्षण गर्नुपर्छ।’
कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी सहजकर्ता विजयदत्त मणिले लिएका छन्। लामो इतिहास भएको लिपि लोप हुन लागेकाले नि:शुल्क कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको उनले बताए। ‘आफ्नै मौलिक लिपि भएको दुनियाँका सीमित भाषामध्ये मैथिली एक हो,’ उनले भने, ‘लोप हुन लागेको लिपिलाई संरक्षण गर्न यो अभियान सुरु गरेको हुँ।’
मिथिलाक्षर वर्णमालामा १० स्वर तथा ३३ व्यञ्जन छन्। तीमध्ये दीर्घ स्वर अर्थात् ई र ऊ को प्रयोग प्राय: हुँदैन। स्वरसँग संयुक्त अक्षरका रूपमा प्रयोग हुने अनुस्वार (अं) र विसर्ग (अ:) पनि व्यञ्जन मानिन्छन्। यसका साथै श, ष, ऋलगायत केही शब्दको उच्चारण हुँदैन।
भाषा वैज्ञानिक प्रा.डा.योगेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार मैथिली लेखनमा मिथिलाक्षरको सट्टा देवनागरी लिपि प्रयोग गर्दा उच्चारणजन्य समस्या आएको छ। लेख्ने बेला धनुषा लेख्ने तर पढदा धनुखा पढ्ने, ऋषि लेख्ने अनि रिसि पढ्नेलगायत उच्चारणगत दोष देवनागरी लिपि प्रयोगका कारणले भएको उनले बताए।
नेपाल र भारतमा गरी मैथिलीभाषीको संख्या झन्डै ५ करोड छ। दुवै देशमा समान रूपले बोलिने भएकाले यसलाई अन्तरसीमावर्ती भाषाको संज्ञा दिन्छन् डा. यादव। मैथिलीलाई तिरहुता, देहाती, ठेंठी, अवहट्ठ वा अपभ्रंश आदि पर्यायवाची शब्दबाट समेत सम्बोधन गरिन्छ।
ब्राह्मी लिपिबाट बांगला लिपि हुँदै इसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा मिथिलाक्षर लिपिको विकास भएको भाषाविद्हरूको दाबी छ। इसापूर्व तेस्रो शताब्दीका अभिलेखमा प्रयोग भएको लिपि मिथिलाक्षर रहेको प्रमाणित भएको छ। आठौं शताब्दीमा लिखित सिद्धवचन तथा दोहा, तेह्रौं शताब्दीमा ज्योतिरीश्वर लिखित वर्णरत्नाकर तथा पुरुष परीक्षा, विद्यापति लिखित दान वाक्यावलीलगायत ग्रन्थ मिथिलाक्षर लिपिमा लेखिएका थिए। नेपाल र भारतका पुस्तकालयहरूमा मिथिलाक्षर लिपिमा लेखिएका सयौं पाण्डुलिपि विद्यमान छन्।
२१ औं शताब्दीको मध्यसम्म लेखिने अधिकांश साहित्य मिथिलाक्षर लिपिमै हुन्थे। अचेल मिथिलाक्षर पञ्जी (मैथिल ब्राह्मण र कायस्थहरूको वंशावली) मा सीमित बनेको छ। पछिल्लो पटक केही साहित्यकारहरू मिथिलाक्षरमा पुस्तक लेखे पनि पाठकको सुविधाका लागि यसको देवनागरी अनुवादसमेत प्रकाशित गर्नुपरेको छ।
मिथिला नाट्यकला परिषदका अध्यक्ष परमेश झाले मुलुकमा भएका सम्पूर्ण भाषा र लिपिको संरक्षण जिम्मा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताए। उनले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक साइनबोर्ड तथा जनचेतनामूलक बोर्डमा मिथिलाक्षर लिपिसमेत प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले देवनागरी लिपिलाई संवैधानिक मान्यता दिएर अन्य लिपिलाई विभेद गरेको आरोप मैथिली शिक्षण विभागका पूर्वप्रमुख परमेश्वर कापडीले लगाए। संघीय सरकारले देवनागरीसँगै अन्य लिपिको समेत संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित : पुस २९, २०७५ ०७:४२